62% yevanyoreri veApple TV + vari kushandisa nguva yekuyedza uye vazhinji havana kuronga kumutsidzira | Ndinobva mac
Mazuva mashoma apfuura takaburitsa chinyorwa uko, nekuda kwekudzidza kwakaitwa neJustWatch, taigona kuona kuti sei Apple TV + mugove wemusika muUnited States iri 3%, mugove uri kure kwazvo nezvimwe zvinopihwa izvo zvakazosvika kumusika seDisney +. HBO Max kana Peacock (NBC).
Iwe haufanire kunge wakangwara kwazvo kuti uzive kuti chikonzero ndechei: kushayikwa kwezviri mukati. Apple yakatanga yavo yekushambadzira vhidhiyo sevhisi isina hwaro yekubatirira, hwaro hunobvumira vashandisi kunakirwa zvisiri zvepakutanga kana zvakasarudzika zvemukati pavanenge vatopedza zvese zvepakutanga zvemukati kana vasingafarire zviripo.
Kuedza kuchengetedza kufarira kwevashandisi uye kuti mhedzisiro inotarisirwa naApple, uye kuti ongororo ichangoburwa inosimbisa, haina kuitika, iyo Cupertino-based kambani ine Yakawedzerwa yemahara kutongwa nguva kusvika Chikunguru, kunyangwe pamwe hazvingakwanise chero bedzi Apple isingasanganisi katarogu yepasi.
Zvinoenderana nevakomana ve Kusiyana-siyana, kuburikidza neongororo yakaburitswa naMoffetNathan, 62% yevashandisi izvo izvozvi vanoshandisa Apple TV + vanoita saizvozvo nekuda kwe tangisa kusimudzira iyo Apple yakapihwa kune vese vashandisi vakatenga iyo iPhone, iPad, Mac kana Apple TV.
Ichi chidzidzo chimwe chete chinosimbisa kuti ruzhinji rwevashandisi usaronga kuzvinyorera zvekare nguva yekuyedza painopera kana vasina chokwadi chekuita. 30% yeavo vashandisi vanoti vanozovandudza kwavo kunyorera kana kwapera. 29% vanoti havachazoishandisa zvakare, nepo 3% yasara ichiti havana chokwadi.
Kufananidza manhamba neDisney +
Kana isu tichifananidza iwo manhamba neaya eDisney +, yakatanga zvakare chirongwa chegore rega chekusimudzira pamwe nekumisikidzwa kwayo kweyekutenderera vhidhiyo sevhisi iyo parizvino inoshandiswa ne16% yevanonyoresa. Pane iyi 16%, 48% vanoti vanozonyoresa zvakare painopera apa 19% isina kuronga kuzviita.
Kana Apple ichida kuchengeta vanyoreri kuti yawana kusvika pari zvino uye kuti hapana kana munhu anoziva nekuti Apple haina kuburitsa huwandu hwepamutemoIwe haugone kumisikidza zano rako chete pakuwedzera zvemukati zvemukati, zvemukati izvo hazvisi chete zvinodhura uye zvinodya nguva kugadzira, asi zvakare zvinoda kupa base base katalog, sezvinoita zvese zvekumhanyisa vhidhiyo masevhisi anoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » 62% yevanyoreri veApple TV + vari kushandisa nguva yekuyedza uye vazhinji havana kuronga kuvandudza
Yakatetepa MacBook Mhepo uye Pro ine SD kadhi kuverenga?